Accueil > Gazetin'ny nosy > Befandriana Avaratra : bodoin’olon-tokana ny tanim-bahoaka 255 ha
Befandriana Avaratra : bodoin’olon-tokana ny tanim-bahoaka 255 ha
Velon-taraina ny mponina any Befandriana Avaratra nohpo ny fibodoan’olon-tokana ny tanin’izy ireo izay efa nohajariany ampolon-taonany maro. Mahatratra 255 Ha izany velaran-tany voabodo izany. Ny mpampanao lalàna ao amin’ny fitsarana any Antsohihy no voatonontonona any ho manao fanamparam-pahefana amin’io tany midadasika io.
Omaly dia efa nisy trano dimy no narodana, izay tafiditra ao anatin’io fakana ho an’olon-tokana ny tanim-bahoaka io. Nihetsika ny mponina omaly, naneho ny tsy fankasitrahany izany. Nanetsika ny mpitandro ny filaminana ny avy amin’ny fampanoavana any an-toerana saingy tsy nety nandray ny baikony izy ireo. Hany herin’ny avy eo anivon’ny fitsarana, ny mpitandro ny filaminana any Antsohihy no nalefa tany, saingy tsy afaka naninona satria vahoaka naneho hevitra tamim-pilaminana no hitan’izy ireo tany.
Mbola hanohy ny fanoherana izao fakana an-keriny sy an-kafetsena ny tanin’izy ireo izao ny mponina any fa tsy hitsahatra raha tsy miverina amin’izy ireo ny taniny.